January 26, 2020 Mahad Jama 2
GAROWE(P-TIMES)- Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidamo badan ay kaga iskaga baxeen furimaha dagaalka gobolka Bari.
Ciidamadani oo ku qalabaysan gaadiidka dagaal iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ay afka saareen dhanka gobolka Sool, waxaana la sheegay in ay ku wajahan yihiin deegaano ka tirsan gobolkaasi oo xiisado dagaal ay ka aloosan yihiin.
Xiisadahani dagaal ayaa u dhaxeeya ciidamada Somaliland iyo Puntland, kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland ay qabsadeen degmada Boocame ee gobolka Sool Jimcihii lasoo dhaafay.
Gudoomiyaha degmada Boocame ee Puntland Xayle Xasan Shire oo warbaahinta la hadlay ayaa dhankiisa beeniyey qabsashada deegaanka Boocame ee Somaliland, waxaana uu sheegay in is rasaasayn kooban ay dhex martay ciidamada Puntland iyo Somaliland isla markaasna ay saraakiishii hogaaminaysay ciidamadaasi Somaliland ay la kulmeen qaar kamid ah waxgaradka degmada Boocame oo ka dalbaday in ay dib uga nqodaan deegaanka Boocame.
Waxa uu sheegay in ciidamadaasi ay dib ugu noqdeen saldhigyadii ay kasoo duleen markii hore oo ku yaala degaanka Tukaraq oo marar kala duwan uu dagaal ku dhex maray ciidamada Puntland iyo Somaliland, hasa yeeshee Puntland ayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan waday maalmihii ugu dambeeyey kadib markii ciidamada Somaliland ay bartilmaameed ka dhigteen gaadhista deegaano ka tirsan gobolka Sool oo Puntland ay ku sugan tahay.
Deegaanada God Qaboobe iyo Faliidh Yaale oo ay ku sugan yihiin ciidamada Puntland ayaa waxaa kusii qul qulayey muddooyinkii dambe ciidamo badan oo ka tirsan kuwa Puntland, kuwaas oo qorshaynaya dagaal ka dhan ah Somaliland.
Heegaan xoogan ayaa la galiyey ciidamada Puntland, waxaana xili walba dhici kara dagaal ka dhex qarxa labada dhinac oo haatan xiisada u dhaxaysa ay xoogaysanayso.
Ciidamada Somaliland ayaa wada qorshe ay ku doonaynayaan in ay ku qabsadaan deegaaano badan oo ka tirsan goboladda Sool iyo Sanaag, waxaana bartilmaameedkooda lagu sheegay deegaanka Goocada oo dhaca duleedka magaalada Garowe halka dagaal uu ku dhex maray deegaanka Shidan oo hoostaga degmada Laas Qoray ciidamadeeda iyo dadka deegaanka kadib markii ay isku dayeen in ay ku qabsadaan deegaankaasi awood dagaal.
Dagaalkii dhacay deegaanka Shidan oo sababay dhaawaca 5 Qof iyo khasaarayaal kala duwan, waxaana Puntland dhankeeda iyana ay sii xoojinaysaa dagaalka ay ku wajahayso Somaliland oo haatan xiisad adag ay kala dhaxayso taas oo ku aadan gobolka Sool oo dhinac kasta uu wado awood dagaal oo ka dhan ah kan kale.
Sheekada la wado waa tii Gas ku fashimay. Qawda maqashii waxnana ha qaban. Hadii diyaar loo yahayn in dib loosoo celiyo kastamkii tukaraq waxa la wado waa durbaan tun been ah oo shicibka lagu maaweelinayo.